Sida dhaqsaha ah ee lagu helo 300 oo doollar | Siyaabo Dhab ah oo Hubaal ah
Bogga ugu weyn 10 Siyaabood oo la Xaqiijiyay oo ku Saabsan Sida Si Degdeg ah Loogu Helo 300 oo Doollar 2022
Waxaa jira dhowr sababood oo u baahan in la sameeyo $ 300 dheeraad ah sida ugu dhakhsaha badan sida baahida loo qabo bixinta xaaladaha degdegga ah ama bixinta deynta oo waqtiga kama dambaysta ah si dhakhso leh u soo dhowaanayo. Waxaan ku jiray xaalado aan u baahnaa inaan lacag degdeg ah ka sameeyo dhowr jeer iyo mar kasta oo aan booqday internetka si aan u baadho sida ugu dhakhsaha badan 300 doollar lagu helo.
Mar kasta oo aan baaray internetka siyaabaha loo sameeyo ilaa 300 oo doollar oo degdeg ah, waxaan arkaa habab kala duwan oo sharci ah oo lacag lagu helo muddo gaaban.
Hababkaan lacag dhaqsaha badan leh ayaa si weyn ii caawiyay waxaanan u maleeyay inaan ku soo laaban doono raalli ahaanshaha anigoo goobtayda ku bixinaya hababka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee sida ugu dhaqsaha badan loogu sameeyo 300 oo doollar.
Sidoo kale, uma baahnid runtii in lagugu leeyahay ama aad u baahan tahay wax badan si aad u bixiso xaaladaha degdega ah ka hor inta aanad u baahnayn inaad raadiso siyaabo aad lacag dheeraad ah u samayso.
Haddii aad haysato shaqo mushahar fiican leh oo ku kasbanaysa lacag caddaan ah oo badan, waxaad weli ku samayn kartaa lacag badan siyaabaha la xaqiijiyay ee samaynta lacag degdeg ah oo lagu muujiyay qaybaha hoose.
Qaybaha xiga waxay ka kooban yihiin dhowr farsamooyin oo la xaqiijiyay oo ka jawaabaya su'aasha ugu dambaysa, sida loo helo 300 doollar degdeg ah?
Ma taqaanaa suuqa caanka ah ee internetka ee lagu magacaabo Etsy? Websaydhku wuxuu siiyaa adeegsadayaasha madal ay ku iibiyaan hal -abuurkooda.
Ma tahay qof hal -abuur leh? Ma waxaad hibo u leedahay waaxda fanka? Ma taqaan naqshadeynta mareegaha? Miyaad xirfad u leedahay naqshadeynta garaafyada? Haddii aad leedahay xirfad la iibin karo sida kuwa yar ee la soo sheegay, fursadaha ah in lacag lagu sameeyo Etsy waa mid aan xad lahayn.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad abuurto astaan ​​suuq geyn karta oo aad iska qorto goobta aad kula kulanto dadka diyaar u ah inay bixiyaan adeegyadaada.
Sidoo kale, waxaad ku xayeysiin kartaa astaantaada dhowr meelood oo warbaahinta bulshada ah sida Facebook ama Twitter si aad u gaarto dadka doonaya inay bixiyaan adeegyadaada.
Wali, kalkaalisada su'aasha ku saabsan sida loo helo 300 doollar dhakhso ah? Esty waa hab loo maro.
#2. Ku baro luqadda Ingiriisiga onlayn
Sidee ugu fiican tahay barashada Luqadda Ingiriiska? Ma leedahay khibrad waxbaris? Ma haysataa galabtiina bilaash? Haddii aad saxday sanduuqyadan, markaa waxaad fursad u leedahay inaad lacag dheeraad ah ku samayso waxbaridda.
Waxaad samayn kartaa ilaa $ 16 saacaddii adigoo baraya carruurta sida loo hadlo loona qoro luuqadda Ingiriiska. Kani waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lacag dheeri ah degdeg loogu sameeyo.
Waxaa jira goobo yar oo aad kula kulmi karto dadka diyaar u ah inay lacag ku siiyaan si aad u barato sida loogu hadlo Ingiriisiga oo mid ka mid ah goobtaas waa www.vipkid.com in kasta oo goobtu u baahan tahay shahaadooyin gaar ah sida shahaadada kulliyadda ee diiwaangelinta.
#3. Iska diiwaangeli Fiverr
Fiverr waa uun suuqa ugu fiican online halkaas oo dhammaan noocyada adeegyada la bixiyo. Adeegyada lagu bixiyo madalku waxay u dhexeeyaan adeegyo xirfad-yaqaanno ah sida qorista maqaallada, samaynta calaamadaha, tarjumidda qoraallada, iwm ilaa adeegyada aan xirfadda ahayn, sida qoob-ka-ciyaarka ilaa hees. Fiverr, waxaad ku dalacaysaa kordhinta $5.
Ka shaqaynta Fiverr waxay la timaadaa faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin ku shaqaynta raaxada gurigaaga xawaarahaaga iyo waqtigaaga.
Miyaad tahay qof hal abuur leh oo ku filan inaad bixiso mid ka mid ah adeegyada kor ku qoran? Waxaa jira adeegyo badan oo aad loogu baahan yahay Fiverr. Booqo mareegaha si aad isu diiwaangeliso maanta si aad lacag degdeg ah u samaysato.
#4. Iska diiwaan geli goobahan si aad lacag u hesho
Ma ogtahay inay jiraan shirkado doonaya inay ku siiyaan lacag bilaash ah ilaa $ 1000 si aad u maal gashato kaydka? Haa, si sax ah ayaad ii maqashay, 'lacag lacag la'aan ah si loo maalgeliyo kaydka'
Ma taqaanaa suuqa sarrifka saamiyada? Diyaar ma u tahay inaad ka ganacsato saamiyada? Shirkadahaani waxay diyaar u yihiin inay ku siiyaan lacag bilaash ah si aad u bilowdo ganacsi. Shirkadaha waxaa ka mid ah kuwan soo socda;
Webull waa app bilaash ah oo lagu soo dejisan karo taleefankaaga casriga ah. Apps-yadu waa bilaash in lagu rakibo taleefankaaga.
Kadib soo dejinta app-ka, waxaad bilaabi kartaa inaad ka ganacsato saamiyada waxaana laga yaabaa inaad saamiyo ku yeelato shirkado caalami ah sida Apple, Ford, iwm. Guji badhanka hoose si aad isu diiwaan geliso.
Tani waa mid ka mid ah apps-ka ganacsiga ugu fiican agagaarka. Marka aad iska diiwaan geliso abka, waxa hubaal ah in aad samaynayso lacag dhan $50 oo gunno ah. Guji badhanka hoose si aad isu diiwaan geliso.
#5. Noqo maamulaha warbaahinta bulshada
Warbaahinta bulshada ayaa si degdeg ah u noqotay qayb aan la kala sooci karin nolol maalmeedkeena iyo summadaha adduunka oo dhan ayaa ka faa'iideysanaya xaqiiqadan si ay u gaaraan dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah.
Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso si aad lacag uga hesho warbaahinta bulshada waa inaad noqotaa mid saameyn leh adoo uruurinaya dhowr raacsan.
Marka magacyadu arkaan inaad ku leedahay dhowr raacsan warbaahinta bulshada, way kuu soo dhowaan lahaayeen si aad uga caawiso inay suuq geeyaan alaabtooda.
Xaaladaha qaarkood, shirkaduhu waxay ku shaqaalaysiin karaan si aad u maamusho hawlaha summadooda warbaahinta bulshada.
Quruxda inaad noqoto maareeyaha warbaahinta bulshada ayaa ah inaad ka shaqayn karto meel kasta oo adduunka ah iyadoo aan loo eegin waqtiga iyo goobta.
Mid ka mid ah meelaha aad ka heli karto sumadaha doonaya inay bixiyaan maamulayaasha warbaahinta bulshada waa www.upwork.com
#6. Qor Maqaallada Mareegaha
Ma tahay qoraa hufan? Ma jeceshahay inaad wax qorto? Ka waran inaad lacag ka hesho qorista? Waxaa jira dhowr baloogyo iyo mareegaha ku xeeran oo raadinaya qoraayaal ka caawiya inay qoraan maqaallo lagu daabaco goobahooda lacag la isku raacay.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka qaadashada riwaayadaha qorista si aad u hesho lacag dheeri ah ayaa ah inaad doorato goorta iyo meesha aad rabto inaad ka shaqeyso.
Haddii aad awood u leedahay inaad wax qorto oo aad sugto inaad lacag badan samayso, iskaashi lala yeesho milkiilayaasha mareegaha waa hab aad ku tagi karto. Waxaad ka heli kartaa shaqooyinka qorista goobaha sida Fiverr, Upwork, shaqooyinka qorista, iwm.
#7. Bilow blog
Blog -ga waa mid ka mid ah jawaabaha ugu wanaagsan ee su'aasha caanka ah, sida loo helo 300 doollar oo degdeg ah. Waxaad ku qori kartaa balooggaaga xiisahaaga sida xayawaan rabaayad, socdaal, caafimaad, waxbarasho, oo aad lacag badan ku hesho. Waxaa jira habab kala duwan oo lacag looga abuuro balooggaaga sida barnaamijka caanka ah ee Google Adsense.
Sidoo kale, waxaad lacag ka samayn kartaa baloog -gaaga adoo iska diiwaangelinaya dhowr meelood oo xiriir la leh. Waxaad lacag ka samaysaa balooggaaga adoo adeegsanaya Google AdSense ama suuq -geynta xiriirka marka dadku soo booqdaan goobtaada.
Waxaad ka heli kartaa dadka inay soo booqdaan goobtaada adoo ku dhiirrigelinaya balooggaaga aaladaha warbaahinta bulshada sida Facebook, Instagram, Twitter, iwm.
#8. Amaah qaado
Habka kale ee la hubo ee lagu sameeyo lacag degdeg ah waa amaahda. Waxaad ka qaadan kartaa amaah aan dulsaar lahayn qoyska ama saaxiibada oo aad dib u soo celiso marka aad haysato lacag kugu filan. Sidoo kale, waxa jira apps dadka siiya deymaha in lagu soo celiyo wakhti go'an. Amaahda noocaan ah waxay badanaa la timaadaa dulsaar yar.
Hababka kor ku xusan ee lacag samaynta ayaa iftiiminaya siyaabaha ugu wanaagsan ee 300 doollar degdeg loogu sameeyo. Hababka qaarkood waxay kaa rabaan inaad noqoto qof hal -abuur leh oo xirfad leh halka hababka kale aysan samayn.
15 Goobo Oo Farshaxanka Lagu Iibin Karo Lacag Badan | 2022
Fiiri Faallooyinka (18)
25 Hiwaayad suuq geyn ah oo Lacag ka Helaya Guriga | Si Dhaqso Ah U Qaado Kaash
Maxaad ugu xayiran tahay shaqo aadan jecleyn marka aad nolol ka heli karto hiwaayaddaada?…